Soo-saareyaasha Matoorada Bambooyinka Haydarooliga ah ee Soo-saareyaasha & Warshada | China Concrete Mixer Truck Haydraulic Pump Motor Wariyeyaasha
Gaariga taangiga la taaban karo PV23, PV089 Sauer matoor biyo ah
Bamka Haydarooliga waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. PPV23, nooca PV089 waxaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo asalka Sauer DanfossPV23, PV089 model. Waxaan leenahay tayada u dhiganta sida midda asalka ah, qiimo tartan badan, gaarsiin degdeg ah, iyo adeegyada ugu wanaagsan ee iibka ka dib. Awoodda dareeraha ELEPHANT waa khabiir koronto koronto ah oo isku xira isku-darka shubka ah ee xirfadleyda ah (gaadiidka bamka) nidaamka hydraulic kaalmaynta, dayactirka iyo sahayda alaabta.
PV23, MF23 matoor bamka biyo-biyoodka ah ee mashiinnada beeraha goosta
Bamka Haydarooliga waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. PV23, model MF23 waxaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo asalka Sauer Danfoss PV23, moodelka MF23. Waxaan leenahay tayada u dhiganta sida midda asalka ah, qiimo tartan badan, gaarsiin degdeg ah, iyo adeegyada ugu wanaagsan ee iibka ka dib. Awoodda dareeraha ELEPHANT waa khabiir koronto koronto ah oo isku xira isku-darka shubka ah ee xirfadleyda ah (gaadiidka bamka) nidaamka hydraulic kaalmaynta, dayactirka iyo sahayda alaabta.
Gaariga isku dhafka la taaban karo ee Sauer PV21, PV22, PV23 matoorka biyaha
Bamka Haydarooliga waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. Moodeelka PV21, PV22, PV23 waxaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo nooca Sauer Danfoss PV21, PV22, PV23. Waxaan leenahay tayada u dhiganta sida midda asalka ah, qiimo tartan badan, gaarsiin degdeg ah, iyo adeegyada ugu wanaagsan ee iibka ka dib. Awoodda dareeraha ELEPHANT waa khabiir koronto koronto ah oo isku xira isku-darka shubka ah ee xirfadleyda ah (gaadiidka bamka) nidaamka hydraulic kaalmaynta, dayactirka iyo sahayda alaabta.